Global Voices teny Malagasy » Hong Kong: artista mandoro ireo sarinjavatra ho fanehoana ny fitakiana pôlitika, Winnie ilay bera, ary vata-pifidianana nandritra ny Andron’ny Avelo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Septambra 2020 5:54 GMT 1	 · Mpanoratra The Stand News Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Fahalalahàna miteny, Hehy, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
Ny lahatsoratra eto ambany dia fandikàna natao avy amin'ny lahatsoratra nivoaka  tamin'ny fiteny shinoa tao amin'ny Stand News tamin'ny 01 Septambra 2020. Naverin'ny Global Voices navoaka araka ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Nandritra ny Fetiben'ny Avelo Noana  natao tamin'ny 1 sy 2 Septambra, nisy vondrona iray nahitàna ireo artista avy ao Hong Kong nanararaotra io fotoana io mba hanehoan-dry zareo ny hasosorana pôlitikan-dry zareo.
Anatin'ny kolontsaina marobe ao Shina, mandoro zavamanitra ny olona, joss paper  (fetan-taratasy namboarina ho vola ifanakalozana amin'ny fanahy, dorana ho toy ny fanatitra), akanjo natao tamin'ny taratasy, volamena ary hatramin'ny telefaona finday ho an'ireo fanahy tonga mitsidika mandritra ny Volan'ny Avelo. Io fomba fanao nentindrazany io dia heverina ho toy ny fanehoana fanajàna an'ireo razambe niaviana — ary fanatosahana ireo fihetsehampo voageja tao anaty ho an'ireo efa nodimandry.
Ireo baomba gammons  namboarin'i Man Chan. Sary an'ny Stand News, nahazoana alàlana.
Ny tarehimarika 8964 dia manondro ny 4 Jona 1989 , fotoana nanaovan'ireo olona iray tapitrisa tao Hong Kog hetsipanoherana ho setrin'ny famoretana nataon'ny governemanta shinoa ary nahafatesana olona maro nandritra ilay hetsika am-pilaminana nitakiana demaokrasia tao Beijing.
Ny 21 Jolay 2019 no andro nisian'ny fanafihana ny zotram-piarandalamby ambanin'ny tany tao Yuen Long , rehefa notafihan'ilay hetsika tselatra mpomba an'i Beijing ireo mpandeha fiarandalamby ambanin'ny tany, niaraka tamin'ny fitazanana fotsiny nataon'ny pôlisy.
Ny 831 dia manondro ny fanafihana ny zotram-piarandalamby ambanin'ny tany tao Prince Edward  tamin'ny 31 Aogositra 2019, rehefa nanaovan'ny pôlisy mpandrava korontana herisetra ireo mpandeha tao nandritra ny ezak'izy ireo hisambotra ireo mpanao fihetsiketsehana handeha hamonjy fodiana.
Tamin'ny herinandro lasa, olona 12 nisy nifandraisany tamin'ny tranga tao amin'ny zotram-piarandalamby tao Yen no nosamborin’ ny polisy tao Hong Kong noho ny fiahiahiana azy ireo ho niketrika “korontana.” Isan'ireny voatàna ireny ilay mpanao lalàna, Lam Cheuk-ting, izay noratrain'ireo mpomba an'i Beijing tamin'io andro io. Ireo mpikatroka dia miampanga ny pôlisy ho miezaka mamerina manoratra indray ny tantara sy mamadika ireo niharam-pahavoazana ho toy ny mpamono olona.
Betsaka karazana zavatra hafa vita tamin'ny taratasy nampitondraina hafatra pôlitika mafonja tao Hong Kong, toy ny aroloha, arotava ary diera – “ny fiantsoany ny diera ho soavaly”  dia fomba fioteny shinoa midika hoe ny mainty lazaina fa fotsy. Ny diera anefa entina anondroana ny zava-marina. Maro tamin'izy ireny no nodorana niaraka tamin'ny taratasy ‘joos’ voatonta tao Hong Kong ary nasiana ny sarintavan'i Carrie Lam filohan'ny mpanatanteraka.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/09/24/149618/
 Fetiben'ny Avelo Noana: https://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_Festival
 joss paper: https://en.wikipedia.org/wiki/Joss_paper
 Image: https://mg.globalvoices.org https://www.thestandnews.com/culture/%E8%97%9D%E8%A1%93%E5%AE%B6%E7%9B%82%E8%98%AD%E7%AF%80-%E7%87%92%E6%95%B8%E7%B0%BF-%E7%87%92%E7%B4%99%E7%B4%AE%E6%89%8B%E6%A6%B4%E5%BD%88-%E6%8A%97%E7%88%AD%E8%A3%9D%E5%82%99-%E5%B0%8F%E7%86%8A%E7%B6%AD%E5%B0%BC/
 4 Jona 1989: https://en.wikipedia.org/wiki/1989_Tiananmen_Square_protests
 fanafihana ny zotram-piarandalamby ambanin'ny tany tao Yuen Long: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Yuen_Long_attack
 ny zotram-piarandalamby ambanin'ny tany tao Prince Edward : https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Prince_Edward_station_attack
 “ny fiantsoany ny diera ho soavaly”: https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/short-reads/article/3082342/hong-kong-government-has-been-accused-calling